आज माघ १ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
पुष २९, २०७७ SG
कुनै कार्य वा प्रोजेक्टमा सरकारको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। अफिसमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीसँग विचार-विमर्श हुनेछ। कार्यभार बढ्नेछ। पारिवारिक मामलामा गहिरो रुचिलिई लिएर सदस्यसँग विचार- विमर्श गर्नुहुनेछ। गृह सजावटको लागि आयोजन गर्नुहुनेछ।
विदेश गमनको लागि सुनौलो अवसर आउनेछ। विदेश बस्ने स्नेही वा मित्रबाट समाचार मिल्नेछ। व्यपारीको धन लाभ हुनेछ। नयाँ आयोजन हातमा हातमा लिनुहुनेछ। लामो दुरीको यात्रा हुनेछ। आध्यात्मिकतामा प्रगति गर्नुहुनेछ। सन्तानको प्रगति हुनेछ।
रिसको भावनाले हानी पुग्नेछ। बिरामी व्यक्तिले ई चिकित्सा वा अपरेशन नगर्नुहोला। बदनामी नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। कम बोलेर वाद-विवाद वा मनमुटावबाट टाढा रहनुहुनेछ। खर्चको मात्रा बढ्नेछ। स्वास्थ्य खराब हुनेछ । मानसिक रूपले तपाईको मनमा निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ।
संवेदनशीलता र प्रेमको भावनाले मन विपरीत लिंगीय पात्र तर्फ अधिक आकर्षित हुनेछ। उत्तम दाम्पत्यजीवन मिल्नेछ। व्यापारीले विदेशबाट व्यपारमा लाभ हुनेछ। प्रेमीजन प्रणयमा सफलता मिल्नेछ ।
उदासीन वृत्ति र संदेहको भावनाले तपाईको मनलाई बेचैन बनाउनुहुनेछ । दैनिक कार्य विलंबबाट पूरा हुनेछ। परिश्रम गरेअनुसार फल कम मिल्नेछ। साथीको सहयोग कम मिल्नेछ। चिन्ताजनक समाचार आउनेछ। शत्रुसँग टक्कर लिन पर्नेछ।
दिन चिन्ता र उद्वेगबाट परिपूर्ण हुनेछ। पेटको गड़बडीले स्वास्थ्य खराब हुनेछ। विधार्थीको पढाईमा अवरोध आउनेछ। अचानक धन खर्च हुनेछ। बौद्धिक चर्चा र सम्झौतामा असफलता मिल्नेछ। प्रिय व्यक्तिसँग भेट हुनेछ। अत्यधिक कामुकताको कारण विपरीत लिंगीय व्यक्ति प्रति आकर्षण अनुभव गर्नुहुनेछ।
विचारको भरमारले तपाई मानसिक रूपले स्वस्थ बन्नुहुनेछ। आमा र स्त्रीवर्ग सम्बन्धि चिन्ता सताउनेछ। यात्रा स्थगित गर्नुहोला। समयमा भोजन र पर्याप्त निन्द्रा नपाउनुको कारण शरीरमा अस्वस्थता अनुभव हुनेछ।
कार्यसफलता, आर्थिक लाभ र भाग्यवृद्धिको योग रहेको छ। भाई – बहिनीसँग कुटुम्बिक चर्चा र आयोजन हुनेछ। तन-मनमा स्फूर्ति र आनन्द अनुभव गर्नुहुनेछ। मित्र तथा आफन्तको घरमा आगमन हुनाले आनन्द हुनेछ। आध्यात्मिक तथा गूढ विद्याको अध्ययनमा रुचि हुनेछ।
परिवारसँग मनमुटावबाट बच्नुहोला। व्यर्थमा पैसा खर्च हुनेछ। मानसिक उचाट र द्विधाको कारण महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला। कार्यमा निर्धारित सफलता प्राप्त गर सक्नुहुनेछ। टाढाको स्थानमा संचारद्वारा सम्पर्क हुनेछ।
ईश्वर भक्ति र पूजा-पाठमा दिन प्रारम्भ गर्नुहुनेछ। परिवारमा मंगलकारी वातावरण रहनेछ। साथी र आफन्तको तर्फबाट उपहार प्राप्त गर्नुहुनेछ। कार्य सरलताले पूर्ण रहनुहुनेछ। पेसा -धन्दामा लाभ हुनेछ।
पैसाको लेनदेन वा जमानतले तपाईलाई फसाउनेछ। एकाग्रताको अभाव मानसिक अस्वस्थता बढाउनेछ । स्वास्थ्यको सम्बन्धमा प्रश्न खडा हुनेछ। पैसाको लागानी गलत ठाउँमा नगर्नुहोला। पारिवारिक सदस्यसँग अनबन हुनेछ।
समाजमा अग्रिम स्थान प्राप्त गर्नुहुनेछ। सामाजिक कार्यमा भाग नलिनुहोला। वृद्द तथा मित्रको सहयोग मिल्नेछ। पेसा – व्यवसायमा आय वृद्धिको योग रहेको छ। सन्तान र श्रीमतीको तर्फबाट लाभ हुनेछ। मांगलिक प्रसंग आयोजित गर्नुहुनेछ।
प्रकाशित : बुधबार, पुष २९, २०७७२२:१२
माघ महिना कुन राशिका लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल !